SAWIRRO: Dibad baxyo iyo Dagaal udhaxeeya Booliska Somaliya iyo Cidamada Amisom oo ka taagan Magaalada. – Kismaayo24 News Agency
by admin 6th October 2019 080
Waxaa saakay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ka dhacay iska hor Imaad u dhaxeeyay ciidamada booliiska Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan degmadaasi gaar ahaan kuwa ka socda dalka Jabuuti.
Sida aan wararka ku heleyno dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada booliiska iyo maamulka degmada Jalalaqsi diideen in la damiyo shirkadaha Isgaarsiinta ee degmadaasi kadib amar kasoo baxay saraakiisha AMISOM.
Ciidamada AMISOM ayaa doonayay in howlgal miino baaris ah ka sameeyaan degmada Jalalaqsi sidaas darteydna amreen in la damiyo shirkadaha isgaarsiinta, waxaana amarkaasi diiday booliiska ka howlgala degmada Jalalaqsi iyo maamulka.
Roobab Xoogan Oo Ka Da’ay Gobalka Hiiraan Iyo Garoonka Diyaaradaha Baladweyne oo daad qaadey.
Sawiro: Wasiirka Amniga Jubaland iyo Sarkaal ciidan oo Maxkamad la horgeeyay
TOP NEWS: Dhageyso Suldaan bayle oo Cawada baaq aad u culus u diray madaxweyne Farmaajo
Dhageeyso Gudoomiye Jawaari oo Shaaciyay…….
DEG DEG: Ciidamo Gadoodsan oo Puntland ka tirsan ayaa xoog kula wareegay Wasaaradda Maaliyadda iyo Bankiga…..